Deegaanka agagaaraha - Muujinta Lahaanshaha Nabadgelyada dhabta ah
Furaha Hagaajinta Awoodda runta ah ee Deegaanka Agile: Awooda waa awooda lagu hagaajinayo xaaladaha isbedelka waxayna ka jawaabaan baahida horumarinta. Si deg deg ah, xaalada adag ee isku dhafan, isdhexgalin dheeraad ah oo la isku daro waxay ku darsataa qarashka mashruuca iyo natiijooyinka mashruuc oo kale oo badan. Tani waxaa lagu fuliyaa iyada oo samaynta nidaamyada maareynta mashruucan si aad u soo dhaweynaya shaacinta, soo bandhigyada iyo isbeddelada ka soo baxa fulinta.
Qaybaha kala duwanaanshaha odhaahda:
Dariishadaha diyaarka ah ee gaaban (mashruucyo badan oo joogta ah, mashruuc gaaban oo isku xiran oo loo maro barnaamij joogto ah).
Dukumiinti ciriiri ah (oo laga dhigo kuwo dardar gelin kara daaqadaha iyo gacmaha-isku-xirka muhiimka ah ee ay bixiso maamulka barnaamijka).
Kordhinta macmiilka la ballaariyey (oo ay ku jiraan mashruuc gaaban iyo kormeerka barnaamijka).
Urur kastaa wuxuu noqon karaa mid aad u xiisa badan laakiin siiba heerka ay u qorsheynayaan istiraatiijiyad ahaan xilliga gaaban iyo si ula kac ah oo ka badan culeyska dheer. Habka ugu wacan wuxuu u baahan yahay nuxurka muddada dhow iyo wakhti dheer.
Ururku wuxuu u soo noqdaa inuu noqdo mid xariif ah haddii nidaamyada mashaariicda xoojiya dib-u-eegista joogtada ah iyo bedelidda habka fulinta mashruuca. Awood ballaadhinta maaha kaliya natiijada helitaanka qalabka maaraynta mashruuca mashruuca Agile. Nadaamka maareynta mashruuca waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ujeedkoodu yahay in ay yihiin kuwo aad u tarjumaya xaaladaha soo noqnoqda, iyagoo bixinaya habab yar oo la adeegsado.
Mashruuca biyo-dhiska ee qabanqaabinaya ururada ayaa ka fogaanaya in ay noqdaan kuwo aad u fog. Baaritaan iyo dukumiinti hore u kordhay ayaa waxay keenayaan qorshe aan macquul aheyn natiijooyinka muddada dheer ee waxa soo socda. Marka dib-u-eegis dhamaystiran la dhammeeyo, shuruudaha ayaa hadda ka hor taagan aragtida isbeddelka khaaska ah iyo suuqa.
Qorshahani waa maareynta barnaamijka agile, kaas oo xoojiya faa'idooyinka faa'iidooyinka iyada oo loo marayo horumarinta mashaariicda gaaban ee si ula kac ah u maareynaya. Mashaariicdan gaaban ayaa u oggolaanaya nidaamka guud ee fulinta in si joogto ah loo cusbooneysiiyo. Dukumeentiyada waxaa lagu hayaa nalka si loo xoojiyo qorshaha la qabsashada. Tilmaamida dukumeentiga dhibcaha, tusaale ahaan, habeynta iyo rabitaanada, waxaa loo soo saaraa natiijooyinka xilliga dhow iyo dukumiintiyada guud ayaa loo sameeyaa natiijooyinka dheeraadka ah. Isku-dhafka waa nidaam gudbin mashruuc ah oo si xeeladaysan u shaqeeya oo si fiican u adeegta baahida macaamilka ee joogtada ah, xoojinta halkan iyo hadda iyada oo aan meesha laga saarin xajmiga dheer.
Feejignaan badan oo aan la-fileynin ayaa ku dhexjirta urur kasta oo leh ama aan lahayn isticmaalka nidaamyada habka hagaajinta barnaamijka Agile. Agility wuxuu ka yimid inuu yeesho nidaamka maaraynta mashruuca la qabsoomay.
7 Tallaabooyinka loo Qoondeynayo Qaababka Xirfadaha Tiknoolajiyada
Shahaadooyinka ugu qaalisan ee loogu talagalay Xirfad-u-dhiska